तराईमा खोप कार्यक्रम प्रभावित « News24 : Premium News Channel
तराईमा खोप कार्यक्रम प्रभावित
काठमाडौं । तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनका कारण ती क्षेत्रका बालिबालिकाले लगाउनुपर्ने नियमित खोप सेवा प्रभावित भएको छ । आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य महाशाखाले पठाएका खोप क्षेत्रीय गोदाममा थन्किएका छन् । पूर्वका लागि पठाइएका खोप पथलैया र पश्चिमका लागि पठाइएका औषधि तथा खोप नेपालगन्ज गोदाममा अड्किएका छन् ।
केही जिल्लाले मोटरसाइकलमा औषधि ल्याए पनि स्वास्थ्य चौकीसम्म पठाउन सकेका छैनन् । खोप पुगेका कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहुने र भएका ठाउँमा बालबालिकासम्म पुर्‍याउन सकिएको छैन । महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले खोप सेवा कार्यक्रम प्रभावित भएको बताएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । ‘अलि–अलि काम भएकै छ, तर अवस्था त्यस्तै छ ।
खोप पुगेका ठाउँमा खोप लगाउने व्यक्ति पुर्‍याइएको छैन । पुगेको ठाउँमा खोप पुगेको छैन भन्ने खबर आएको छ,’ उनले भने । आपूर्ति व्यवस्था विभागका निर्देशक डा. भीमसिंह टिंकरीले औषधि तथा खोप गोदामसम्म पुगेको, तर सबै जिल्लामा पुर्‍याउन सहज नभएको बताए ।